UGOOGLE CHROME AKAPHENDULI? NAZI IINDLELA EZI-8 ZOKUYILUNGISA! - ITHAMBILE
UGoogle Chrome akaphenduli? Nazi iindlela ezi-8 zokuyiLungisa!
Lungisa iGoogle Chrome ayiphenduli Umba: I-Intanethi ingowona mthombo mkhulu woLwazi. Akukho nto ehlabathini ulwazi lwakho olungenakufumana i-Intanethi. Kodwa ukuze usebenzise i-Intanethi, udinga isikhombisi esiza kukunika iqonga lokusefa, ukukhangela kunye nayo yonke imisebenzi ofuna ukuyenza usebenzisa i-Intanethi. Xa ujonga esona sikhangeli silungileyo sokwenza umsebenzi wakho, esokuqala kunye nesona sikhangeli siza kuthi qatha engqondweni sithi Ugoogle Chrome.
Ugoogle Chrome: UGoogle Chrome ngumnqamlezo weqonga lewebhu elikhutshwa, liphuhliswe kwaye ligcinwa nguGoogle. Ifumaneka simahla kwi khuphela kwaye usebenzise . Yeyona bhrawuza izinzileyo, ikhawulezayo nethembekileyo. Ikwalicandelo eliphambili le-Chrome OS, apho isebenza njengeqonga losetyenziso lwewebhu. Ikhowudi yemvelaphi ye-Chrome ayifumaneki kuyo nayiphi na into eyenzelwe wena. Ingasetyenziswa kuyo nayiphi na inkqubo yokusebenza njengeLinux, iMacOS, i-iOS kunye ne-Android.
UGoogle Chrome uphuhliswa ngabaphuhlisi kungoko ingeyiyo i-100% ye-bug-free. Ngamanye amaxesha, xa uqala i-chrome, ayizukuphendula kwaye ayizukuxhuma kwi-Intanethi. Ngamanye amaxesha, iyaqhubeka nokuphazamiseka. Xa imeko enjalo isenzeka, uyahendeka ukuba utshintshele kwezinye izikhangeli ezinje ngeFirefox, i-Intanethi Explorer, njl.njl.
Iingxaki ezahlukeneyo abajamelana nazo abasebenzisi zezi:
Emva kokufunda eli nqaku, ukuba ujongene nemeko i-Chrome ayiphenduli emva koko akufuneki utshintshele kuso nasiphi na esinye isikhangeli. Zininzi iindlela onokulungisa ngayo i-Chrome ayiphenduli ngxaki.
Iindlela ezahlukeneyo zokuLungisa iGoogle Chrome ayiphenduli
Indlela 1-Zama ukuqala kwakhona i-Chrome
Indlela yesi-2-Jonga imisebenzi eya kwiChannel
Indlela yesi-3-Ukujonga uhlaziyo
Indlela ye-4-Khubaza iiLwandiso ezingafunekiyo okanye ezingafunekiyo
Indlela yesi-5-Skena iMalware
Indlela yesi-6-Jonga ukungqubana kweApp
Indlela yesi-7 -Khubaza ukukhawulezisa izixhobo zeHardware
Indlela yesi-8 -Buyisela iChannel okanye ususe iChannel
Apha ngezantsi kunikwa iindlela ezahlukeneyo zokusebenzisa onokuzilungisa umba wokukhutshwa kweGoogle Chrome kwaye ungayibuyisela kwimeko ezinzileyo.
Ukuba iGoogle Chrome yakho iyaphazamiseka okanye iqhwa, okokuqala, kuya kufuneka uyivule kwakhona ngaphambi kokwenza naluphi na utshintsho ukulungisa ingxaki yakho.
1.Cofa uqhubeke icon ezintathu zamachaphaza thaca kwikona ephezulu ngasekunene.
2.Cofa kwi Phuma iqhosha ukusuka kwimenyu kuvula.
3.Google Chrome iya kuvala.
4 Yivule kwakhona ngokunqakraza kwi I-icon yeGoogle Chrome ikhona kwi-Taskbar okanye ngokunqakraza kwiimpawu ezikhoyo kwi desktop.
Emva kokuvula kwakhona iGoogle Chrome, umba wakho unokusonjululwa.
Ungavula iithebhu ezininzi kwiChannel kwaye ukhuphele nantoni na ngokuhambelana nokubrawuza ezi tab. Kodwa yonke le misebenzi ifuna ikhompyuter yakho ye-RAM. Ke, ukuba ikhompyuter yakho ayinayo i-RAM eyaneleyo emva koko ukuvula iithebhu ezininzi okanye ukukhuphela ngokufanayo kunokusebenzisa i-RAM eninzi kwaye kunokubangela ukuba iiwebhusayithi zibhideke.
Ke, ukumisa ukusetyenziswa kakhulu kwe-RAM, vala iithebhu ongazisebenzisiyo, nqumama ukhuphelo ukuba kukho naziphi na kwaye uvale ezinye iinkqubo ezingasetyenziswanga ezisebenza kwikhompyuter yakho.Ukubona ingakanani i-RAM eyi-Chrome kunye nezinye iinkqubo eziyityayo kunye nokuphelisa iinkqubo ezingasetyenziswanga landela la manyathelo alandelayo:
1 vula Umlawuli womsebenzi ngokuyikhangela usebenzisa ibha yokukhangela kwaye ucofe iqhosha lokungena kwiKhibhodi.
windows i-10 pc iqala kwakhona ngokungacwangciswanga
Umphathi wakho weTask uza kubonisa zonke iinkqubo eziqhubayo ngoku kunye neenkcukacha zazo njengokusebenzisa i-CPU, iMemori, njl.
3. Phakathi kweapps zangoku ezisebenza kwikhompyuter yakho, ukuba ufumana nayiphi na usetyenziso olungasetyenziswanga , ukhethe kwaye ucofe Ukuphelisa Umsebenzi iyafumaneka kwikona esezantsi ngasekunene kweMphathi weMisebenzi yewindows.
Emva kokuvala iinkqubo ezingasetyenziswanga kunye neethebhu ezongezelelweyo ezivela kwi-Chrome, kwakhona zama ukuqhuba i-Chrome kwaye ngeli xesha unokukwazi Lungisa iGoogle Chrome engaphenduliyo , ukuba akunjalo qhubeka nendlela elandelayo.
Kukho ithuba lokuba iGoogle Chrome ingasebenzi kakuhle kuba ilindele uhlaziyo kodwa ayikwazi ukukhuphela kunye nokuzifaka. Ke, ngokujonga ukuba kukho naluphi na uhlaziyo olukhoyo onokusombulula ingxaki kuGoogle Chrome engaphenduliyo.
1.Cofa uqhubeke amachaphaza amathathu icon ekhoyo phezulu kwikona yasekunene yeChannel.
2.Cofa kwi Nceda iqhosha kwimenyu evulayo.
3.Under Uncedo ukhetho, cofa apha Malunga neGoogle Chrome.
4 Ukuba kukho uhlaziyo olufumanekayo, uGoogle Chrome uza kuqala ukukhuphela.
Emva kokuba iChannel igqibile ukukhuphela kunye nokufaka uhlaziyo, cofa ku Phinda uqalise iqhosha.
Emva kokuhlaziya, iGoogle Chrome yakho ingaqala ukusebenza ngokufanelekileyo kunye neyakho Umcimbi obandayo we-Chrome unokuconjululwa.
Indlela 4 - Khubaza izandiso ezingafunekiyo okanye ezingafunekiyo
I-Google Chrome isenokungasebenzi kakuhle ngenxa yolwandiso olufakelweyo. Ukuba unolwandiso oluninzi olungafunekiyo okanye olungafunekiyo emva koko luya kugungxula isikhangeli sakho. Ngokususa okanye ukukhubaza izandiso ezingasetyenziswanga unokukwazi ukusombulula ingxaki yakho.
1.Cofa uqhubeke icon ezintathu zamachaphaza iyafumaneka kwikona ephezulu ngasekunene kweChannel.
2.Cofa kwi Izixhobo ezingakumbi ukhetho kwimenyu evulayo.
3.Under More tools, cofa apha Izandiso.
4. Ngoku iya kuvula iphepha eliza kuthi bonisa zonke izandiso zakho ezifakiweyo ngoku.
5 ngoku khubaza lonke ulwandiso olungafunekiyo ngu ukucima i-toggle inxulunyaniswa nolwandiso ngalunye.
6 Okulandelayo, cima ezo zandiso zingasetyenziswanga ngokunqakraza kwi Susa iqhosha.
Ukuba unezandiso ezininzi kwaye awufuni ukususa okanye ukukhubaza ulwandiso ngalunye ngesandla, vula imowudi ye-incognito kwaye iya kukhubaza ngokuzenzekelayo zonke izandiso ezifakiweyo ngoku.
I-Malware isenokuba sisizathu sokungaphenduli kwakho kuGoogle Chrome. Kwimeko apho ujamelana nengozi rhoqo yesikhangeli, kuya kufuneka uskene inkqubo yakho usebenzisa iAnti-Malware okanye isoftware yeAntivirus Ukhuseleko lweMicrosoft kubalulekile (Yinkqubo yasimahla kunye nesemthethweni yeAntivirus nguMicrosoft). Ngaphandle koko, ukuba unayo enye i-antivirus okanye i-malware scanners, ungasebenzisa kwakhona ukususa iinkqubo ze-malware kwinkqubo yakho.
I-Chrome ine-Malware yayo eyakhelwe ngaphakathi ekufuneka uyivulile ukuze uskene iGoogle Chrome yakho.
1.Cofa uqhubeke icon ezintathu zamachaphaza iyafumaneka kwikona ephezulu ngasekunene.
2.Cofa kwi Useto kwimenyu evulayo.
3.Skrolela ezantsi kwephepha lezicwangciso kwaye uza kubona Phambili ukhetho apho.
4.Cofa kwi Iqhosha eliphambili ukubonisa zonke iinketho.
5.Under Reset kwaye ucoce ithebhu, cofa apha Coca ikhompyuter.
6. Ngaphakathi kuyo uya kubona Fumana isoftware eyingozi ukhetho. Cofa kwi Fumana iqhosha thaca phambi kokufumana ukhetho lwesoftware eyingozi ukuqala ukuskena.
7. Isakhelo esakhiweyo seGoogle Chrome Malware siza kuqala ukuskena kwaye siya kujonga ukuba kukho naziphi na iisoftware eziyingozi ezibangela ukungqubana neChannel.
8. Emva kokugqitywa kokuskena, I-Chrome iya kukwazisa ukuba ifumene nayiphi na isoftware eyingozi okanye hayi.
9 Ukuba akukho software iyingozi emva koko ulungile ukuba ungahamba kodwa ukuba kukho naziphi na iinkqubo eziyingozi ezifumanekayo ungaqhubeka kwaye uyisuse kwiPC yakho.
Ngamanye amaxesha, ezinye iiapps ezisebenza kwiPC yakho zinokuphazamisa ukusebenza kweGoogle Chrome. UGoogle Chrome ubonelela ngento entsha ekunceda ukuba wazi ukuba ikhona iapp esebenzayo kwiPC yakho okanye hayi.
2.Cofa kwi Iqhosha leseto ukusuka kwimenyu kuvula.
3.Skrolela ezantsi kwephepha lezicwangciso kwaye uza kubona Ngaphezulu o ption apho.
5.Skrolela ezantsi kwaye ucofe ku Hlaziya okanye ususe usetyenziso olungahambelaniyo.
6 Nantsi iChannel iya kubonisa zonke usetyenziso olusebenza kwiPC yakho kwaye lubangele ukungqubana neChannel.
7.Susa zonke ezi zicelo ngokunqakraza kwi Susa iqhosha thaca phambi kwezi zicelo.
Emva kokugqiba la manyathelo angentla, zonke izicelo ezazibangela ingxaki ziya kususwa. Ngoku, zama kwakhona ukusebenzisa iGoogle Chrome kwaye unganakho Lungisa iGoogle Chrome engaphenduliyo.
Ukukhawuleziswa kwezixhobo zekhompyutha luphawu lweGoogle Chrome ekhuphela umsebenzi onzima kwelinye icandelo hayi kwi-CPU. Oku kukhokelela kuGoogle Chrome kuqhutywa kakuhle njengoko iPCU yakho yePC ingenakujongana nawo nawuphi na umthwalo. Rhoqo, ukukhawulezisa izixhobo zezandla phezu kwalo msebenzi unzima kwi-GPU.
Njengokwenza ukuba ukukhawuleziswa kweHardware Hardware kuncede iChannel isebenze ngokugqibeleleyo kodwa ngamanye amaxesha ibangela ingxaki kwaye iphazamise noGoogle Chrome. Ke, ngo kukhubaza ukukhawuleziswa kweHardware Umcimbi kaGoogle Chrome ongaphenduliyo unokusonjululwa.
1.Cofa kwiimpawu ezintathu zamachaphaza ezikhoyo kwikona ephezulu ngasekunene.
3.Skrolela ezantsi kwephepha lezicwangciso kwaye uza kubona Inketho ephezulu Pha.
5. Ngaphantsi kwethebhu yeNkqubo, uya kubona Sebenzisa ukukhawulezisa izixhobo xa kukho ukhetho.
6. Guqula ucime Iqhosha elikhoyo phambi kwayo ukuze khubaza inqaku lokukhawulezisa izixhobo zeHardware.
7. Emva kokwenza utshintsho, cofa ku Phinda uqalise iqhosha ukuqala kwakhona iGoogle Chrome.
Emva kokuba i-Chrome iqale kwakhona, zama kwakhona ukufikelela kuyo kwaye ngoku ingxaki yakho yokubanda kweGoogle Chrome isombululwe.
Ukuba emva kokuzama onke la manyathelo angentla, ingxaki yakho ayikasonjululwa oko kuthetha ukuba kukho umba othile onobuzaza ngeGoogle Chrome yakho. Ke, kuqala zama ukubuyisela i-Chrome kwifom yayo yoqobo okt ususe lonke utshintsho olwenze kuGoogle Chrome njengokufaka naziphi na izandiso, naziphi na iiakhawunti, amagama agqithisiweyo, amanqaku encwadi, yonke into. Iya kuyenza i-Chrome ijongeke njengofakelo olutsha kwaye nayo ngaphandle kokufaka kwakhona.
Ukubuyisela iGoogle Chrome kuseto lwayo olungagungqiyo landela la manyathelo alandelayo:
5.Ngaphantsi kokusetha kwakhona nokucoca ithebhu, uya kufumana Buyisela useto kwiziphene zabo zoqobo ukhetho.
6. Cofa ivuliwe Buyisela useto kwiziphene zabo zoqobo.
7.Ibhokisi yencoko engezantsi iya kuvula eya kukunika zonke iinkcukacha malunga nokubuyisela useto lwe-Chrome.
Phawula: Phambi kokuqhubeka funda ulwazi olunikiweyo ngononophelo nasemva koko kunokubangela ukulahleka kolwazi lwakho olubalulekileyo okanye idatha.
8 Emva kokuqinisekisa ukuba ufuna ukubuyisela i-chrome kuseto lwayo loqobo, cofa indawo Cwangcisa kwakhona useto iqhosha.
Emva kokugqiba la manyathelo angentla, iGoogle Chrome yakho iya kubuyisela kwifom yayo yoqobo kwaye ngoku zama ukufikelela kwiChannel.Ukuba ayisebenzi nangoku umba kaGoogle Chrome ongaphenduliyo unokusonjululwa ngokususa ngokupheleleyo iGoogle Chrome kwaye uyibuyisele kwakhona ekuqaleni.
Cofa iqhosha leWindows + ukuvula Useto emva koko ucofe ku I-icon yeapps.
2.Under Apps, cofa apha Iiapps kunye neempawu ukhetho kwimenyu yasekhohlo.
Uluhlu lweeapp kunye noludwe lweempawu eziqukethe zonke iiapps ezifakwe kwiPC yakho ziya kuvula.
4.Kuluhlu lwazo zonke iiapps ezifakiweyo, fumana Ugoogle Chrome.
5. Cofa kuGoogle Chrome phantsi kweeNkqubo kunye neempawu. Ibhokisi yencoko yababini eyandisiweyo iya kuvulwa.
6. Cofa kwi Khipha iqhosha.
7. IGoogle Chrome yakho ngoku iya kukhutshwa kwiKhompyuter yakho.
Ukubuyisela ngokufanelekileyo iGoogle Chrome landela la manyathelo alandelayo:
1 vula nasiphi na isikhangeli kunye nokhangelo Khuphela iChannel kwaye uvule ikhonkco lokuqala liyavela.
2.Cofa kwi Khuphela iChannel.
Ibhokisi yencoko yababini engezantsi iya kuvela.
4.Cofa kwi Yamkela kwaye ufake.
5. Ukhuphelo lwakho lweChannel luza kuqala.
6. Nje ukuba ukhuphelo lugqityiwe, vula i-Setup.
7. Cofa kabini kwifayile yokuseta kwaye ufakelo lwakho luza kuqala.
Emva kokugqitywa kofakelo, qala ikhompyuter yakho kwakhona.
Ndiyathemba ukuba eli nqaku beliluncedo kwaye ngoku ungalula Lungisa iGoogle Chrome engaphenduliyo Windows 10 , kodwa ukuba usenayo nayiphi na imibuzo malunga nesi sifundo emva koko uzive ukhululekile ukubabuza kwicandelo lamagqabaza.
akukho sandi sinoGoogle chrome
sebenzisa iiapps ezikwi windows 10
uzilungisa njani windows 10 iingxaki zokuqalisa ngo-2018
Uzibona njani iziphumo zokuchongwa kwememori yeWindows
indlela yokumisa windows 10 uhlaziyo lwasekhaya